विश्व थाइराइड दिवसः कसरी पहिचान... :: सेतोपाटी :: Setopati
विश्व थाइराइड दिवसः कसरी पहिचान गर्ने रोग?
सेतोपाटी ललितपुर, जेठ ११
आज मे २५ अर्थात विश्व थाइराइड दिवस । नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतना मुलुक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ।
दिवसको अवसरमा ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको अल्का अस्पताल प्रालि, काठमाडौं डाइबेटिज एण्ड थाइराइड सेन्टर र लाइन्स क्लव अफ काठमाडौं अल्काले संयुक्त रुपमा र्याली निकालेको छ।
अल्का अस्पतालबाट सुरु भएको र्याली जावलाखेल,कुमारीपाटी, मंगलबजार, पुल्चोक हुदैँ पुन अल्का अस्पतालमा आएर सकिएको थियो। विश्व थाइराइड दिवसका अवसरमा अल्का अस्पतालले विहान ९ बजेबाट अपरान्ह ४ बजेसम्म निशुल्क स्वास्थ्य शिविरसमेत आयोजना गर्दैछ ।
पछिल्लो समय नेपालको जनसंख्याको ४ दशमलव ५ प्रतिशत मानिसलाई थाइराइड रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । नेपालमा थाइराइड बढ्नुको मुख्य कारण हामीले खाने नुनमा आयोडिनको मात्रा धेरै रहेको डाक्टर अशुंमाली जोशीले बताए। शरिरमा आयोडिन थोरै वा धेरै हुदाँ थाइराइड ग्रन्थीहरुलाई असर गर्ने उनले बताए। थाइराइड पहिचानका लागि रगत परीक्षण, थाइराइड स्क्यान, भिडियो एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ।
के हो थाइराइड?
मानव शरिरमा रहेको रुद्रघण्टीको तलतिर रहने ग्रन्थीलाई थाइराइड ग्रन्थी भनिन्छ । यो पुतली आकारको हुन्छ। यो ग्रन्थीले हर्मोन उत्पादन गर्ने गर्छ । यो हर्मोनले शरिरमा मोटावोलिजम नियन्त्रण गर्छ । थाइराइडलाई पिट्युटरी ग्रन्थीले नियन्त्रण गर्छ । यी हर्मोनहरुको शरिरको बृद्धि विकाशमा अहम भुमिका हुन्छ । थाइराइड ग्रन्थीमा देखिने समस्याबाट हर्मोन उत्पादनमा असन्तुलन हुन्छ। र रोग लाग्छ । त्यो रोगलाई थाइराइड रोग भनिन्छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ११, २०७६, ०७:५६:००
गोंगबु घटना: फेसबुकमा नांगो फोटो राखेपछि रक्सीमा हालेर स्लिपिङ ट्याबेलट, अण्डकोषमा हानेर हत्या
विध ल्यावमा अनलाइन भुक्तानी गर्दा थप २०० छुट
रक्तदान किन र कसले गर्ने?
शाकाहारी खानाले मात्र पुग्दैन शरीरमा प्रोटिन
विध म्यानेजमेन्टले काठमाडौंका ५० जना ट्राफिक प्रहरीको गर्यो निःशुल्क कोरोना परीक्षण